ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE အလွှာ မှအရည်အသွေးမြင့် Kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE အလွှာ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE အလွှာ အနံ့ခံရန်လိုအပ်သည့်အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်နိုင်သောအမှုန့်များကိုထုပ်ပိုးရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်နို့မှုန့်၊ ဘိလပ်မြေ၊ မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Summer Show Plastic Corporation extrusion lamination မှတဆင့်အဖြူ / အညိုရောင် kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE ယက်ထည်ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်နောက်ထပ် Skid- ဆန့်ကျင်အရည်အသွေးတွေကိုကုသနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုလိပ်များသို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်များသို့မဟုတ် HDPE အိတ်များကို Kraft Paper laminated အဖြစ်ထောက်ပံ့သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံတကာတင်ပို့မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
သို့မဟုတ်အခြား PP / PE ယက်ထည်ပစ္စည်း? အသေးစိတ်ကိုငါတို့နှင့်မျှဝေပါ ဒီမှာငါတို့ကူညီနိုင်တယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ရွေးချယ်နိုင်သောပေါ်လီမာအမှုန့်များမှဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအရင်းအမြစ်များမှအရည်အသွေးမြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် Taiwan။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမှီခိုနိုင်ပါတယ်။
HDPE ယက်ထည်–Kraft စက္ကူလမိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောပိုလီမာ laminated kraft စက္ကူပြီးပြည့်စုံပြီးအောင်နှင့်အတူကြွလာအမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုး application များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည် PP အဆင့်ပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုများကိုလည်းပေးသည်/ထိုင်ဝမ်မှအိတ်များနှင့်ပစ္စည်းများ.အမြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဘို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ,ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/hdpe-laminated-fabric-with-kraft-paper.html
အကောင်းဆုံး Kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE အလွှာ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Kraft စက္ကူနှင့်အတူ HDPE အလွှာ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ